त्यही सम्पत्तिकी मालिक्नीको यो दुर्गति ! मबाट भयङ्कर गल्ती भयो भगवान्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् ! | Ratopati
त्यही सम्पत्तिकी मालिक्नीको यो दुर्गति ! मबाट भयङ्कर गल्ती भयो भगवान्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् !
मुन्सी प्रेमचन्दका कालजयी रचना : बुढी काकी
personमुन्सी प्रेमचन्द exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २८, २०७६ chat_bubble_outline0
एक जना भतिजोबाहेक उनको आफ्नो भन्नु कोही थिएन । 'सम्पत्ति मेरो नाममा गरिदिनुस् काकी, म तपाइँलाई सुखसित पाल्छु' भनेर धेरै फकायो । सुखानन्दको सपना देखायो । भगवानको कसम खायो । लौ त भनेर पास गरिदिइन् ।
उनका पतिदेव बितेको वर्षौं भइसकेको थियो । छोराहरु थिए ती पनि कलिलैमा बिते । अव एक जना भतिजोबाहेक उनको आफ्नो भन्नु कोही थिएन । 'सम्पत्ति मेरो नाममा गरिदिनुस् काकी, म तपाइँलाई सुखसित पाल्छु' भनेर धेरै फकायो । सुखानन्दको सपना देखायो । भगवानको कसम खायो । लौ त भनेर पास गरिदिइन् । उनको जायज्येथाबाट उनलाई वर्ष दिन खान लाउन र चाडबाड मान्न प्रशस्त पुग्ने आयस्ता आउँथ्यो । घर राम्रै थियो । एक्लोपन बाहेक अरु सुखै थियो । अब भतिजो परिवार लिएर त्यहीँ बस्न आयो । बुढी काकी खुसी भइन् ।
आफूले गरेका अन्याय अत्याचारवापत पछुताउने बानी बुद्धिरामको थिएन । काकीको सम्पत्ति पाएपछि बेला बेला ठान्थ्यो, बुद्धि पुर्‍याएँ । यसै सम्पत्तिले त भलादमी देखिन पाएको छु । साँच्चै अब उसको शान बढेको थियो । मौखिक आश्वासन र सुक्खा सहानुभूतिले काम चल्दासम्म उसलाई कुनै आपत्ति थिएन । पैसा खर्च गर्न पर्‍यो भने चाहिँ उसलाई खपिसाध्य हुन्थेन । घरमा कोही भलादमी मानिस आइपुगेर बसेको बेला बुढीकाकीले आफ्नो राग अलाप्न थालिन् भने बुद्धिराम रिसले आगो हुन्थ्यो र काकीनिर गएर जोरले हप्काउँथ्यो । किशोर उमेरका उसका दुई छोराहरुलाई घरमा बुढीकाकीको कुक्लुक्ढुक् बसाइ यसै त मन पर्थेन । त्यसमा पनि आफ्ना बाआमाले मन नपराएको देखेपछि मान्छे गन्नै किन पर्‍यो र ? कुनै बुढी काकीको कानमा चिमोटेर हाहा गर्दै दगुर्थ्यो, कुनै मुखभरी पानी राखेर बुढीका मुखमा पिचकारी छोड्थ्यो । बुढीलाई सताउँदा उनीहरुलाई रमाइलो लाग्थ्यो । बिचरी बुढी काकी बदलामा केही गर्न सक्दिनथिन् । अलापविलाप गरेर रुन्थिन् । छिमेकीहरु यी खन्चुवा बुढी जहिले पनि खानकै लागि रुन्छिन् भन्ठान्थे । यसैले उनका आर्तनादमाथि कसैको ध्यान थिएन । अत्याचार अति हुँदा क्रोधातुर बनेर कदाचित् काकीले ती केटाहरुलाई गालीदिन थालिन् भने रुपा रातोपिरो हुँदै घटनास्थलमा आइपुग्थी । बुहारीका डरले काकी सकेसम्म जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्थिन् । अति हुँदा मात्र एकाध शब्द गाली फुत्कन्थ्यो । यद्यपि अत्याचार शान्तिका लागि रुनुभन्दा त कराउनु नै उचित उपाय थियो ।
आज बुद्धिरामको जेठो छोरो मुखरामको तिलक आएको थियो । यो त्यसैको उत्सव थियो । घरभित्र महिलाहरु गाइरहेका थिए । रुपा अतिथिहरुका लागि खानपानको व्यवस्थामा मग्न थिई । चुल्हामा ह्यामानका कराहीहरु बसालिएका थिए । एउटामा पुडी कचौडी पाक्दैथियो । अर्कोमा अन्य विभिन्न पकवान्न पाक्दैथिए । एउटा कराहीमा मसालेदार तरकारी पाक्दैथियो । घिउ र मसलाको क्षुधाबर्धक सुगन्ध चारैतिर फैलेको थियो । बुढीकाकी आफ्नो कोटरीभित्र शोकमग्न विचार बसेजसरी जुम्लुङ्ग बसिरहेकी थिइन् । यो स्वादमिश्रित सुगन्धले उनलाई बेचैन बनाएको थियो । मनैमन सोच्दैथिइन् यिनीहरुले मलाई पूडीतरकारी दिँदैनन् होला । यति अबेर भइसक्यो । खोई भोजन लिएर कोही आउँदैन ।मेरो लागि त केही बाँकी नै नराख्लान् कि ? यसरी सोच्दासोच्दै उनलाई मनमा रुन आयो । अपशकुनका डरले धितमर्ने गरी रुन पनि सकिनन् ।
रुपा त्यतिखेर कामले अस्तव्यस्त थिई । कहिले यस कोठामा त कहिले उस कोठामा । कहिले भन्छामा त कहिले भँडारमा । उसको लहबरी थियो । कसैले बाहिरबाट आएर भन्यो, भन्छेदाइले ठण्डइ माग्नुभा छ । उ ठण्डइ दिन लागी । यस्तैमा अर्को कसैले आएर भन्यो, भाट आएको छ, उसलाई केही खानेकुरा दिनुस् । भाटका लागि खाद्यथाली निकाल्दै थिई, तेस्रो मान्छे आएर भन्यो, अब खाना तैयार हुन कति समय लाग्छ ? ढोल मजिरा निकालिदिनुस् न । बिचरी एक्ली रुपा दगुर्दादगुर्दै व्याकुल भइरहेकी थिई । मनमनै भुटभुटिन्थी, दुःखी हुन्थी । रिस देखाउने अवस्था थिएन । छिमेकीले के भन्नेहुन् ? यत्ति काम पर्दा पनि भुलुक् भुलुक् उम्लन थाली भन्ने हुन् कि ? मनमा डरैडर थियो । पानी पिउनसम्म पनि फुर्सत् नपाएर घाँटी सुकिरहेको थियो । गर्मीले हपक्क भएर पिल्सेको शरीरबाट पसिना धारा छुटिरहेका थिए । पुछ्ने फुर्सत् थिएन । पानी पिउँ र एक्कैछिन पङ्खामुनि बसौँ कि जस्तो लाग्यो । आँट आएन । आँखा झिमिक्क गर्दा पनि सामान चम्पत हुने डर बेग्लै थियो । यस्तो वेला कराहीनिर बुढीकाकी टुक्रुक्क बसेको देखेर रुपाका टाउकामा आगो बल्यो । सहिसक्नु भएन । छिमेकी महिलाहरु बसेका छन्, पुरुषहरु पनि छन् के सोच्लान् के भन्लान् भन्ने कुनै होस रहेन । भ्यागुताले गँड्यौला देख्दा जसरी झम्टा हान्छ, ठीक त्यसै गरी झम्टेर बुढीकाकीलाई कर्‍याप्च्याप् पारी र कोटरीतिर हुत्ता लाउँदै भनी, ‘यस्ता अलच्छिनाका पेटमा त आगो लाग्नु नि । कस्तो खाउँखाउँ हो त्यो ? कोठामा एकछिन पर्खेर बस्दा सास रोकिन्थ्यो ? अहिले पाहुनाले खाएका छैनन् । भगवानलाई भोग लागेको छैन । अहिल्यै आएर मेरो छातीमाथि चढ्न हतार भयो ? एकछिन पनि धैर्य राख्न नसक्ने कस्ती राकस्नी बुढी । यस्ताका जिभ्रामा त आगो सल्कनु नि । दिनभरी खान नपाएकी भए त अझ पाहुनाका भाग भागमै थुतुनो गाड्न पुग्दी हो । गाउँलेले देखे भने यस बुढीलाई पेटभरी खान पनि नदिँदा रहेछन् र सधैँ हाँ हाँ गर्दै घस्रन्छे पनि भन्लान् । कि घुत्रुक्क मर्नु कि यस्ता हन्तकाली बानी छोड्नु । हाम्रो नाममाथिको कलङ्क । हाम्रो नाक काटेरै छोड्ने भयौ हैन बुढी ? दिन दिनै थालकालथाल दाना हसुर्‍या पनि कहाँ भष्मखरानी भा हो । अझै बाँच्न मन छ भने खुरुक्क घस्रेर आफ्नो कोठामा जाऊ । घरका परिवारले खाने बेला भएपछि तिम्लाई पनि पठाइदिउँला । कसैका मुखमा पानी नपर्दै पूजा पुर्‍याउनुपर्ने तिमी कुनै देवीमाता त हैनौ नि बुढी, सुन्या हो ?’
मनैमन यसरी आफैलाई गाली गर्दै काकी बोलावटको प्रतीक्षामा रहिन् । घिउको रुचिकर बास्नाले काकीका धैर्यको परक्षिा लिइरहेको थियो । एक एक पल लम्बेतान युग जसरी बितिरहेका थिए । ‘पाहुनाहरु सबै आइसके होलान् । हातगोडा धुँदै होलान् । नाइ सबैका लोहोटामा पानी राखिदिँदै
होला । लाग्छ अब आँगनमा पाहुनाहरु यथास्थान खान बसिसके । तिनका अगाडि पुडी र परिकार आइसके । ज्यूनार गीत शुरु भइसक्यो ।’ यस्तै यस्तै सोच्दै मन भुलाउन काकी ओछ्यानमा पल्टिन् । एउटा गीत सम्झनामा आयो । बिस्तारै त्यही गीत गुनगुनाउन थालिन् । यस्तैमा उनलाई लाग्यो, ‘मैले गीत गाउन सुरुगरेको पनि कति बेर भइसक्यो । यति बेरसम्म पाहुनाहरु अझै खाइइरहेका नै होलान् र ? खै कतै केही आवाज सुनिँदैन । मानिसहरु खानपीन गरेर हिँडिसकेका हुनसक्छन् । मलाई बोलाउन कोही आएन । रुपा रिसाएकी छ । बोलाउन मनै लागेन कि ? आफैं आउली भन्ठानेकी पो हो कि ? काकी कुनै पाहुना त हैन नि, किन बोलाउनुपर्छ भन्ने ठानी कि ?’ मनमा कुरा खेलाउँदा खेलाउँदै बुढी काकी पुनः भोजभएतिर जान तैयार भइन् । एकै मिनटमा मसालेदार तरकारी र पुडी अगाडि आउँछ भन्ने विश्वासले उनको स्वादेन्द्रिय गुदगुदाउन थाल्यो । मनैमन योजना बनाइन् —‘पहिले तरकारीसित पुडी खान्छु । अनि पछि दही सक्खरसित पनि पुडी खान्छु । कचौडी त अचारसित बढी स्वादिलो हुन्छ । कसैले ठीक मानुन् कि नमानुन् म त आज मागीमागी खान्छु । धित् मर्ने गरी खान्छु । मानिसहरु भन्लान् बुढी धेरै नै भोकाइछ । मुख बिटुलो मात्र गरेर त किन उठ्ने ?’
काकीले सोधिन्, “तिम्री आमाले पठाएकी हो ?”
“हैन काकी, यो मेरै भागको हो !” लाडलीले भनी ।
काकीको पेटले धैर्य गर्न सकेन । फटाफट पुडी खाइन् । पुडी सकियो । लाडलीले सोधिन् “काकी, पेट भरियो त ?”
“आमा निदाइसक्नुभएको छ । ब्युँझाएँ भने मार्नुहुन्छ !” लाडलीले भनी ।
काकीले अँध्यारोमा छाम्दै अघि पुडी ल्याएको फुच्चे बक्सा उठाइन् । एक दुई टुक्रा खसेको भेटियो । निकालेर खाइन् । पटक पटक ओठ चाटिन् । जिभ्रो पड्काइन् ।
अनुवाद : शारदारमण नेपाल
Title Picture: http://ik.imagekit.io